Tun Tun's Photo Diary: Singapore's Orchard Road Christmas Decoration 2014
နှစ်တိုင်း Orchard Road မှာပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်နေတော့ ရိုက်ထားတာတွေ တူနေမှာဆိုးလို. တမူထူးခြားအောင် ကြိုးစားပြီး ရိုက်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သိပ်တော့ အားမရဘူး။ ဒီပို.စ်ထဲက ပုံတွေက Orchard ကို ၂ခါ သွားပြီးရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ။ ပထမတခါ ရောက်ဖြစ်တုန်းက Compact Camera (SONY RX100 II) နဲ. ရိုက်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယတခါ ကြတော့ Canon DSLR နဲ. ထပ်ပြီး ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယနေ.က မိုးရွာနေတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို.သိပ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ ကင်မရာ ၂ခုလုံးက ရတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပေါင်းပြီး ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ ပုံလေးတွေ ကို စုစည်းထားတာပါ။
ညတိုင်းမီးတွေထွန်းထားတာ အရမ်းလှတော့ ဓါတ်ပုံလာရိုက်တဲ့သူတွေလဲ အင်မတန်ပေါပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေ မပါအောင်ရိုက်ရတာ အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် MRT ပိတ်တဲ့အချိန် ညသန်းခေါင် လောက်လာရိုက်ရမယ်ထင်တယ်။ အဲ့အချိန်ဆို လူတွေ သိပ်ရှိမယ်မထင်ဘူး။
စင်ကာပူက စာဖတ်သူတွေကော Orchard Road ကို ရောက်ပြီးပြီလား? ဒါမဟုတ် စင်ကာပူကို ဒီရက်ပိုင်းလာလည်မယ့် သူတွေဆိုရင် Orchard Road ကို သွားဖြစ်အောင်သွားပါလို. ညွန်းပါရစေ။
Date Taken : 16-Nov-2014 & 29-Nov-2014
at 12/03/2014 08:02:00 PM